ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော် | ဧရာဝတီ
ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဧရာဝတီ| January 10, 2013 | Hits:1,369
| | ယနေ့ တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမတွင် ကျင်းပသည့် ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ၌ လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ရက်က ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – နန်းဆိုင်နွမ်/ ဧရာဝတီ)
ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းပေးရန် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသည့် ပြည်သူများက ယနေ့နေ့လယ် ၁၁ နာရီမှ စတင်ကာ ရန်ကုန် ရွှေဂုံတိုင် တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပွဲတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် မြန်မာ အစိုးရ တပ်မတော်တို့ တိုက်ခိုက်နေသည့် စစ်ပွဲကြောင့်
နှစ်ဘက် တပ်များအနေဖြင့် ကျည်လွတ်မြေ စစ်မဲ့ဇုန်တခု သတ်မှတ်ပေးရန်၊ ထိုစစ်မဲ့ဇုန်တွင် စစ်မက်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များ လုံးဝ မပြုလုပ်ရန်၊ နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင် တပ်များမှ လေးစားယုံကြည် အသိအမှတ်ပြု သဘောတူထားသော စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ပေးနိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများက အမြန်ဆုံး ရွေးချယ်ကြေညာပေးရန် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူများက တောင်းဆို ထားကြောင်း သိရသည်။
“ဖားကန့်မှာဆိုရင် စစ်ပွဲဖြစ်လို့ ထွက်ပြေးနေရတယ်။ မနက်မိုးလင်းလာတာနဲ့ အထုပ်တွေ ကိုင်ပြီး ဟိုပြေးဒီပြေး ပြေးနေ ရတယ်၊ အခုအထိပါပဲ။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မြန်မြန်ရဖို့ပဲ ဆုတောင်းနေရပါတယ်” ဟု ယင်းပွဲကို
တက်ရောက်လာသည့် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသမှ ကိုခင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
စစ်ပွဲရပ်ဆိုင်းရန် အခမ်းအနား အမျိုးမျိုး လုပ်ဆောင်နေသကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှု တခုခု ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေသည်ကို ၀င်ရောက် မပြောဆိုလျှင် ပိုမို ဆိုးရွားနိုင်ကြောင်း၊ စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူများ၏
ဘ၀သည် အလွန်ပင် သနားစရာကောင်းကြောင်း၊ စစ်တိုက်မှုကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသည့် ၁၀၅ မမ ကျည်တတောင့် တန်ဖိုးသည် ကျပ်သိန်း ၃၀ ကျော်ရှိသဖြင့် ထိုကျည်းဖိုးများကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးပြုမည်ဆိုက အလွန်ပင် ကောင်းမွန်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောသည်။
“ကျည်ဆံဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေး သံတမန်မဟုတ်ဘူး။ အခုဆိုရင် ကလေးငယ်တွေ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ စစ်တိုက် ကစားနည်းတွေနဲ့ ဆော့ကစားနေတာ သူတို့ အနာဂတ်အတွက် စိတ်ပူပန်ရတယ်။ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေ အချင်းချင်း ယူတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးက မသေချာဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ၊ ဒေသခံတွေ လိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပုံစံကို ဖော်ထုတ် တောင်းဆိုသွားမယ်” ဟု ကိုမင်းကိုနိုင်က ဆက်ပြောသည်။
လက်ရှိ စစ်ဘေးသင့် ဒေသမှ လာရောက်သည့် ကချင်တိုင်းရင်းသားများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်ရအောင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ စစ်ဘေးကြောင့်နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူ (IDP) များလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမြန် ရလို နေကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် IDP စခန်းများအတွင်း ဒုက္ခသည် ပိုမိုများလာကြောင်း၊ ကိုယ့်အိမ်တွင် ယခင်လို ပြန်နေနိုင်ဖို့
မျှော်လင့်ထားကြကြောင်း ကချင်ဒေသခံများက ပြောကြားသွားကြသည်။
“အခု စစ်ပွဲကြောင့် နှစ်ဘက် စစ်သားတွေ ၂ သောင်းလောက် ကျဆုံးသွားပြီ။ ပြီးတော့ စီးပွားရေး ကောင်းတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့
ကချင်ဟာ အခုဆိုရင် ဘာအလုပ်မှ မရှိသလို၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့ပဲ နေနေရပါတယ်” ဟု ဖားကန့်ဒေသမှ ဦးချိုက ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ပြည်သူများသည် စစ်ကိုမလိုလားကြောင်း၊ စစ်ငြိမ်းရန် လိုအပ်နေကြောင်း၊ ယခင်ကကဲ့သို့ မိမိနေရပ် ဒေသကို ပြန်ကာ လယ်ယာ ပြန်လုပ်လိုကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် သဘောထား ကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုပါက အလွန်ပင် ၀မ်းမြောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ အမြန် ဆောင်ရွက်ပေးလိုကြောင်း ဖားကန့်မှ ဦးဘရန်ရှောင်ကလည်း ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ အခု ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူတွေက လက်မှတ်ထိုးပြီး ဖေဖော်ဝါရီမှာ နောက်ဆုံးထားပြီး ကောက်မယ်။ ပြီးတော့ သက်ဆိုင်တဲ့ KIA နဲ့ သမ္မတဆီကို တင်သွားမယ်။ သူတို့ရော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လောက်အထိ လိုလားလဲဆိုတာ သိရမယ်” ဟု အဖြူရောင်တွဲလက်များ အဖွဲ့မှ ကိုဘိုဘိုက ယင်း အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့သည် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၆ ရက်နေ့အထိ ကချင်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ အနေဖြင့် စစ်ရေး အရှိန်လျှော့ပေးရန်နှင့် ခိုင်မာသော ကတိက၀တ် အာမခံချက်များ ရှိပါက နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေသည့် ကချင်တိုင်းရင်းသားများ သည်လည်း စစ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဇန်န၀ါရီ ၁၀ ရက်နေ့က တရုတ်ပြည်၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ နားပမ်းမြို့၌ စုဝေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကူမင်း၊ မန်ရှီ၊ ရွှေလီ၊ ရင်ကျန်း မြို့နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ တခြားသော ရပ်ရွာများတွင် ပြန့်ကျဲ နေထိုင်နေကြသူ ကချင်တိုင်းရင်းသားများ သည်လည်း မြန်မာ အစိုးရက လေကြောင်းမှ မရပ်မနား ထိုးစစ်ဆင်နေမှုကို ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ကချင်အားလုံး တစိတ်တ၀မ်းတည်း ဖြစ်သည်ကို ပြသရန်အတွက် လူအင်အား ၁၅၀၀ ကျော်က ကားစီးရေ ၁၀၀
ကျော်ဖြင့် လိုင်ဇာ တဖက်ကမ်း နားပမ်းမြို့သို့ လာရောက် စုဝေးခဲ့ကြသည်ဟု ဒေသခံတဦးက ဆိုသည်။
“မနေ့ကမှ တိုင်ပင်ပြီးလုပ်တာပါ။ အစက လူ ၆၀၀ လောက်ပဲ စာရင်းပေးတာ၊ အခုတော့ ထပ်တိုးထပ်တိုးနဲ့ ၁၅၀၀ လောက်အထိ ရှိသွားတယ်။ အခုလဲ လာနေကြတုန်းပဲ” ဟု ယင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ကူညီပေးနေသည့် လိုင်ဇာမြို့သူ မရစ်ဒီးလာက ပြောသည်။
တရုတ်အာဏာပိုင်များသို့ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ ရုတ်တရက် စုဝေးခြင်းကြောင့် လိုင်ဇာ တဘက်ကမ်းမှ အာဏာပိုင် များက နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ခွင့် မပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဘာမှအားမငယ်ဖို့၊ အားလုံးက တစိတ်တ၀မ်းတည်း ရှိတယ်ဆိုတာ ပြဖို့ လာကြတာပါ” ဟု မရစ်ဒီးလာက ထပ်မံဆိုသည်။
ယနေ့ တော်ဝင်နှင်းဆီခမ်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဆန္ဒခံယူပွဲသို့ ကချင်ဒေသခံများ၊ အဖြူရောင်တွဲလက်များ အဖွဲ့၊ ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်၊ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကနှင့် သံဃာတော်များ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ မအူပင် ပျိုးခင်းသစ် လူငယ်အဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူ ပြည်သူများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ရက်မှ ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ဧရာဝတီသတင်းထောက် နန်းဆိုင်နွမ်၊ နန်းသီရိလွင်နှင့် လဖိုင်တို့ ပူးပေါင်းရေးသားသည်။
မိုးညှင်း ကျောက်လုပ်သားများ KIA တပ်သားသစ်အဖြစ် စုဆောင်းခံရကချင်စစ်ပွဲများအပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးKIO နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းကိုယ်စားလှယ်များ မြစ်ကြီးနားတွင် တွေ့မည်KIA နှင့် အစိုးရတပ်များ တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ငွေကြေးအကူအညီ ပြည်ပမှ ယူနေရ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Salai Samuu January 10, 2013 - 8:32 pm	Good,This zone can be tired kia soldiers resort.Hope all people from kachin state are peace soon.Peace Peace 2013.
Reply	အောင်အောင် January 11, 2013 - 8:47 am	You should present this show in under control of kia area (lizer). No one need war also Kachin state people. But some one need war,who’s.
Reply	Wynn Aung January 11, 2013 - 5:35 pm	How much did you pay for royal rose hall rent?You should give this rent fee to kachin refugees if you are simple and innocence and not under influence by some …one.. I think ,don’t need royal hall for you are street band.maybe,I amabad thinker.Cheers
Reply	တခြားဖတ်စရာများ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အားပေးမည်ဟု အိုဘားမားပြော